Inishuwarenzi Yechipfuwo: Inoshanda Sei? | Bezzia
Inishuwarenzi Yechipfuwo: Inoshanda Sei?
Nguva dzese isu patinenge tiri vazhinji avo vanosarudza goverana hupenyu hwedu nemhuka, kunyanya imbwa nekatsi. Kuvapo kweizvi kwakawedzera zvakanyanya mumakore gumi apfuura uye kuitira kuvimbisa kuchengetwa kwavo uye kuzvidzivirira kubva kukuvadzwa kune vechitatu mapato, inishuwarenzi yemhuka yakaberekwa.
Inishuwarenzi yezvipfuyo Hazvisi zvitsva, zvisinei, mumakore achangopfuura kufarira mavari kwakura. Imbwa nekatsi ndiyo mhuri mbiri dzezvipfuwo zvakachengetedzwa nevaridzi vadzo kuSpain, asi havazi ivo chete vanogona kubatsirwa nazvo.
1 Nei uchifanira kutenga inishuwarenzi yemhuka?
2 Vanoshanda sei?
3 Kuiroja riini?
Nei uchifanira kutenga inishuwarenzi yemhuka?
Kunze kwevaridzi vanogovana hupenyu hwavo nembwa dzinoiswa seinogona kuva nenjodzi uye avo vanogara mune chero maMunharaunda umo chisungo chinowedzerwa kune mamwe marudzi, varidzi vese vakasara zviri pamutemo kusungirwa kutora inishuwarenzi yezvipfuyo zvavo. kambani. Saka nei uchizviita?
Kugovera hupenyu hwedu nemhuka kunoda kuti isu tivape, mukuwedzera kune yakakosha kuchengetwa, kumwe kunzwisiswa kwakasarudzika kunowanikwa kubva mutsaona kana kurwara. Sevhisi dzinowanzo sangana nesu zvikwereti zvakakura zvezvivakwa zvezvipfuyo zvekukurumidzira nekuchipatara izvo zvisiri nyore nguva dzose kufunga nemari uye neinishuwarenzi yemhuka inogona kutibatsira.
Izvo zvakakoshawo mune zvimwe zviitiko kuchengetedzwa kubva kukuvara kune vatatu mapato kune icho chipfuwo chedu chingave chine chekuita uye chinogona kuve dambudziko nemhedzisiro yakakomba kumuridzi wayo.
Nekudaro, inishuwarenzi yemhuka inova inoshamisa chishandiso che anovimbisa rugare rwedu rwepfungwa seanotarisira mhuka mukutarisana nezviitiko zvisingatarisirwe nemhedzisiro yakaipa.
Iwo makambani anotengesa inishuwarenzi yemhuka muSpain anopa varidzi vawo a yakawanda yekuvhara. Izvo zvinofukidza kukuvadzwa kune vechitatu mapato uye zvekurapa zvezvipfuyo semhedzisiro yetsaona kana chirwere ndizvo zvinonyanya kudiwa, asi kwete chete kufukidzwa kunowanikwa.
ari kukuvara kunotambudzwa nemhuka yako yemhuka zvekuba kana kufa netsaona.
Mari yezvipfuyo nekuda kwekurwara kana tsaona
Dzosera Kubva mari yekutsvaga kwako nekurasikirwa munhau dzemuno.
Mari yekugara canine kana feline kana iwe uri muchipatara.
Kubaira uye kurapwa kwemuviri.
Sevhisi kubvunza nezvezvipfuyo runhare maawa makumi maviri nemasere.
Semutemo wenguva dzose, makambani einishuwarenzi aya anowanzove nawo akaronga boka revashandi iyo iwe yauchazokwanisa kuenda uye iyo masevhisi ayo achave zvishoma kana zvakazara akafukidzwa neako mutemo. Uye chii chinoitika kana pasina chiremba wemhuka munzvimbo yangu inosangana neichi chinhu? Muchiitiko chekuti mhuka ichengetwe munzvimbo isiri-yekudyidzana, uchafanirwa kuvhara mari uye ndokumbira kubhadhara kubva kukambani, inozodzorera chikamu chemutengo. Makambani einishuwarenzi anowedzera uye anosanganisira sarudzo yemahara yechiremba wezvipfuyo muzvigadzirwa zvekubatsira zvipfuyo, saka haufanire kunetseka zvakanyanya nezvazvo.
Kana iwe uchida iyo inishuwarenzi kuisa iyo rubatsiro rwezvipfuyo kufukidza Kune imbwa yako kana katsi, iwe unofanirwa kuibhadhara mushure memwedzi mitatu yehupenyu hwemhuka uye pamberi pemakore masere kana gumi, zvinoenderana nerudzi rweinishuwarenzi nemutemo. Uye zvakare, iyo mhuka inofanirwa kusangana nezvimwe zvinodikanwa kuti iwe ugone kuisimbisa. Kazhinji kazhinji ndeaya:
Iva noutano hwakakwana apo inishuwarenzi inobvumirwa. Kusina kana kutambura nechirwere mugore rapfuura.
Asina kumbovhiyiwa panguva yehupenyu hwake, kunze kwekuvharwa.
Chengetedza chirongwa chekudzivirira chiripo.
Ziva ne microchip.
Kubhadhara kunowanzoitika pagore uye iwe uchave unokwanisa kuiverenga mune simulators ayo mazhinji emakambani einishuwarenzi emakambani anosanganisira pane yavo webhusaiti. Mazhinji acho anofanirwa kuratidza kuti imhuka ipi, rudzi rwayo, zera rayo uye mhando yekuvhara iyo yainofarira. Kuverengerwa kunenge kuchiratidza uye kana uchifarira unogona kukumbira kuti vakufonere kuti unatsiridze nekuhaya.
Iwe unowana ichi cherudzi rwechigadzirwa chinonakidza here? Wakambofunga nezve kutora inishuwarenzi yezvipfuyo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Mascotas » Inishuwarenzi Yechipfuwo: Inoshanda Sei?
Mikova yemoto: Tsvaga ese ayo makuru mabhenefiti!
5 inodonha michero mukati meimba